Miyaad iibsaneysaa iPad-ka oo aadan garanayn midka? Waxaan isku dayi doonaa inaan ku caawiyo | Wararka IPhone
Miyaad iibsaneysaa iPad-ka oo aadan garanayn midka? Waxaan isku dayi doonaa inaan ku caawiyo
Toni Cortés | | iPad, iPad Air, iPad Pro, dhowr
Sanadkan, baaxadda Ipad-yada waa wax laga naxo. Taariikhda Apple waligeed kuma dhicin xulashooyin badan oo shaashadda iyo moodooyinka shaashadda ah. Tani waxay ka dhigaysaa go'aan ka gaarista hal iPad ama mid kale waxay noqon kartaa go'aan adag. Haddii aad horey u laheyd mid aadna cusbooneysiineyso, waxaad heysataa wax aad u fudud, maxaa yeelay waxaad si fiican u taqaanaa waxaad ku qaban karto iyo waxaad weydiisaneyso inay sameyso.
Way ka sii dhib badan tahay haddii ay tahay kaniinigaaga ugu horreeya. Waa inaad si cad u cadeysaa waxa aad u isticmaali doontid. Kaa dhigi maayo inaad ku wareerto muuqaalada ama xog fara badan, kaliya afar fikradood oo ay tahay inaad ku cadaato, oo aad faallo ka bixiso waayo-aragnimadayda anigoo adeegsanaya afarta nooc ee la heli karo. Waxaan rajeynayaa inay waxtar leedahay.
2020 Apple iPad (laga bilaabo ...
2021 Apple iPad Pro (laga bilaabo ...
2020 Apple iPad Air (laga ...
1 Xuduudaha kala duwan
8 Ku ekeysii KURSIGA
Dhammaan ipadyadu waxay leeyihiin laba nooc: WI-FI, iyo WI-FI + Cellular. Marka ugu horeysa waxaad ku xirmi kartaa oo keliya Wi-Fi, tan labaadna waxaad geli kartaa kaarka SIM-ga oo waxaad ku dhex mari kartaa xiriir taleefan 4G ah. Midkani waa mid fudud. Haddii aad u isticmaali doontid iPad-kaaga guriga ka baxsan, ha ka fekerin oo qaado WI-FI + Cellular. Ma jiraan wax ka dhib badan raadinta wifisyada dadweynaha si ay u baaraan. Oo iska illow wadaagista xiriirka ka socda iPhone. Aragtida waa mid aad u wanaagsan, waxayna u shaqeysaa si qumman, laakiin waxay dhalaali doontaa batterigaaga gacanta muddo. Idhagayso. Maxaa dhacaya haddii sida caadiga ah kama qaadi doontid wadada, ku sii 4G.
Halkan arrimuhu waxay ku bilaabmayaan inay noqdaan kuwo murugsan. Awoodda xusuusta waxay u dhaxeysaa 32GB ee iPad-ka illaa 1TB ee bahalka iPad Pro. Way fududahay in la yiraahdo xusuusta badan ayaa ka sii wanaagsan, haddiiba ay dhacdo, laakiin markaad aragto kala duwanaanshaha qiimaha ee u dhexeeya awoodaha kala duwan, waa inaad heshaa isku dheelitirnaan si aadan lacagtaada u lumin. Fikrad ahaan, 64GB. Waxaad haysataa in kabadan oo kugu filan codsiyo iyo dukumiintiyo badan. Uma baahnid wax intaa ka badan, oo aan ahayn ... waxaad u isticmaashaa inaad ku daawato taxanaha ama filimada ka baxsan gurigaaga. Waxaan haystaa saaxiib iibsaday 1TB iPad Pro isla marka uu soo baxo. Wax badan ayuu ku safraa AVE oo had iyo jeer wuxuu qaadaa taxane iyo filimaan si uu ugu arko tareenka. Waa waxa kaliya ee aan u arko inay ansax ku tahay in lacagta lagu kharash gareeyo meel aad u ballaaran.
Khiyaano: haddii tusaale ahaan aad u isticmaali doontid inaad ku daawato taxanaha intaad ku socoto gaadiidka dadweynaha, xisaabi waqtiga daawashada maalinlaha ah, waxaadna awoodi doontaa inaad ogaato awoodda aad u baahan tahay si aad ugu cusbooneysiiso dhacdooyinka toddobaadkii hal mar. Ku dar 64 GB ee lagama maarmaanka u ah barnaamijyada aan horay u soo sheegay, waxaadna arki doontaa in 128 GB aad ku filan tahay fiidiyahaaga maalinlaha ah.
Ha ka welwelin midabka dhabarka haddii aad dabool saareyso
Si fudud. Ha ka welwelin midabka dhabarka. Waxaad ku dambayn doontaa inaad dabool saarto oo waad joojineysaa inaad aragto. Kaliya dooro jaantuska hore, waxaadna leedahay laba midab oo keliya: Caddaan ama madow. Si fudud, sax?
Haddii aan horeyba uga cadahay seddexdan doorsoome, waxaan kuu sharixi doonaa khibradeyda afarta nooc ee iPad-ka la heli karo, waxaadna arki doontaa sida aakhirka aad wax walba u cadaan doonto.
2019 Apple iPad mini (laga ...
Khariidadda waddada. Aad u fudud. 7,9 shaashad inji ah Waxaan u isticmaali jiray muddo afar sano ah, maalin kasta, anigoo u shaqeynaya sidii ganacsi ahaan. Ku habboon isticmaalka wadada. Waa lagama maarmaan in la iibsado WI-FI + Cellular. La jaanqaadida jiilka koowaad ee qalinka Apple, waa warqad qoraal ah oo ku habboon. Xitaa waxaan ku rakibay buur gaariga dhexdiisa waxaanan u adeegsaday GPS ahaan. Kufiican shaqada.
Ipad cad. Magac qoys. Heerka gelitaanka ee iPad-ka 9,7-inji ah. Waa nooca ugu raqiisan iPad-ka, taas macnaheedu maaha inuusan ahayn dheecaan. Ku dhaji processor A fusion processor ah oo leh awood ku filan oo aad ugu dhaqaaqi karto fudayd wixii erey-sameeye ah, wax ka beddel sawirada, ama fiidiyowyada 10K. Waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa nooca koowaad ee qalinka Apple. Ku habboon ardayda: qorista, tafatirka PDF-yada, sawiro sawiro, iwm. Kufiican daawashada waxyaabaha maqalka ah ee Netflix, HBO, iwm. Is-waafajin iyo dhaqaale dhan-wareeg ah. Kiniin ku habboon qoyska oo dhan, yar iyo weyn. Dabcan, kuma talinayo nooca 32 GB, waxay noqon kartaa wax yar oo caddaalad ah. Haddii aad awoodid, hel midka soo socda, midka 128GB ah. Hadafku wuxuu noqonayaa 64GB, laakiin ma jiro.
Waxaan kor ugu kici doonaa darajo kale, labadaba bandhig iyo processor. Fuulaan cusub 10,5 inch screen run, iyo mid ka mid ah processor-rada ugu dambeeyay ee Apple, ayaa A12 Bionic oo leh 'Neural Engine'. Waa ka badan mustaqbal mustaqbalka kan hadda. Haddii aad isbarbardhigto waxqabadkii iPad-kii hore ee barnaamijyada aad isticmaali doontid maalin kasta, ma qadarin doontid farqi badan, marka laga reebo shaashadda, dabcan. Qalabkan 'A12' waxaad ku hubineysaa waxqabadka muddada dheer ee sannado badan. Xaqiiqdii macruufka aan ahayn 13, laakiin 14 ama 15 ayaa ku socon doona dhibaato la'aan iPad Air. Waxaad haysataa nooc 64GB ku habboon. Uma aha qalab qoyska oo dhan qalab ahaan, laakiin waa rabitaan shaqsiyeed.
Bahal bunni ah. Waxaan la joogay afar bilood waana ku faraxsanahay. Waa iPad-ka ugu weyn xagga shaashadda iyo processor-ka. Waad ku iibsan kartaa Muujinta 11 ama 12,9 inji oo ah 120 Hz Promotion. Furo processor A12X Bionic la Neural Engine, iyo 4 GB RAM xasuusta. Uma maleynayo inuu jiro wax barnaamij ah Apple Store oo dhan oo ka dhigaya A12X inuu shaqeeyo 50%. Laga yaabee markay Adobe sii deyneyso Photoshop-keeda oo buuxa oo loogu talagalay iOS, oo aan wax ka bedelno sawir aad u sarreeya oo leh lakabyo badan, waxaan ku qasbi doonnaa processor-ka inuu ku shaqeeyo awood buuxda. Iyada oo codsiyada caadiga ah inaan dhammaanteen isticmaalno maalin kasta, daalacashada, emaylka, shabakadaha bulshada, iyo barnaamijyada fiidiyowga, processor-ka ma qasan.
Leh a tayada codka cajiibka ah. Waxay leedahay afar kuhadal, laba dhinac kasta, oo siinaya wadar guud khibrad. Qaabdhismeedka ayaa looyareeyay ugu yaraan, maadaama uusan laheyn badhanka guriga. Waxay ka soo gudubtay aqoonsi faraha ilaa Aqoonsiga wajiga, oo lagu sii daayay iPhone X. Gaar ahaan waa arrin in la hagaajiyo. Waxay ku leedahay kamaradda bartamaha qaybta kore, meel taagan. Dhibaatadu waxay timaaddaa haddii aad ku isticmaasho muuqaal ahaan. Had iyo jeer waxaan ku qabsadaa gacanta bidix, inta aan ku isticmaalo gacanta midig, anigoo daboolaya kaamirada iyo sameynta furitaanka aqoonsi wajiga oo aan macquul aheyn. Haddii aad bidix tahay, dhib dambe kuma heysatid.
IPad Pro. Kuwa ugu awooda badan ee aan maanta heli karno.
Farxad kale ayaa ah Jiilka labaad ee qalinka Apple. Iska ilow fiilada inay ku soo dallajiso stylus. Waxay ku dallacdaa indho-indheynta dhinaca iPad Pro. Mid qabow. Waxaad ku haysataa awoodo laga bilaabo 64GB illaa 1TB. Haa, haa, Terabyte ah. Waqtigan xaadirka ah, farqiga kaliya ee ay u leedahay ixtiraamka laptop kasta waa iOS, marka loo eego MacOS ama Windows. Laakiin tan bisha Sebtember ayaa isbedelaysa. Iyada oo la adeegsanayo iOS 13, waxaad isticmaali kartaa jiirka bluetooth, shabakadda safari ee webka oo dhammaystiran maamulaha soo dejinta, iwm Kadib ma jiri doono wax farqi ah oo u dhexeeya iPad Pro iyo laptop.
Ku ekeysii KURSIGA
Noocyada 'Ipad' ayaa loo barbardhigi karaa noocyada gawaarida nooc kasta, sida SEAT, tusaale ahaan
Haddii aan isbarbar dhigno iPads-yada kala duwan ee SEAT gawaadhida, tusaale ahaan (maahan astaan ​​ahaan, maadaama tayada iyo qiimaha ay ahaan lahaayeen BMW ama Mercedes Benz) waxaan dhihi karnaa iPad Mini wuxuu noqon lahaa SEAT Mii, ugu yar inta udhaxeysa. Ipad-ka Ibiza, mid dhaqaale iyo mid badan. Kadibna iPad Air, AronaWaxaan dhihi lahaa, iyo ugu dambeyntii iPad Pro, oo ah 300 hp Ateca Cupra.
Waxaan rajaynayaa in maqaalkan kadib, aad haysatid wax yar oo cad oo ah iPad-ka kugu habboon baahiyahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Miyaad iibsaneysaa iPad-ka oo aadan garanayn midka? Waxaan isku dayi doonaa inaan ku caawiyo
“Dhibaatadu waxay imaaneysaa haddii aad ku isticmaasho muuqaal ahaan Had iyo jeer waxaan ku qabsadaa gacanta bidix, inta aan ku isticmaalo gacanta midig, anigoo daboolaya kaamirada iyo sameynta furitaanka aqoonsi wajiga oo aan macquul aheyn. Haddii aad bidix tahay, dhibaato dambe ma heysatid. "
Miyaad isku dayday inaad soo wareejiso? Waxaan hayaa iPad Pro 12,9 ", oo macno malahan haddii kamaradu ku taal midigta ama bidixda. Si sax ah shaashadda shaashadda ayaa tan u oggolaaneysa iyada oo aan lahayn badhanka guriga.
Haa, dabcan, dabool la'aan dhibaato ma jirto, waad rogtaa waana intaas. Kiiskeyga, kiiska aan wato, qalinka qalinka salka ku haya iyo laabka si aad ugu heysato iPad-ka hoosta ayaa ka raaxo badan, oo leh badhamada mugga, ma rogi kartid iPad-ka waxayna kugu qasbeysaa inaad haysato kamaradda xagga sare. bidix. Ama dabool daboolka (Ma dareemayo sida, aniga wey igu weyn tahay) ama waan ciyaaraa bidix… Salaan!
Waxay soosaaraan hab lagu cabbiro cadaadiska dhiigga fiidiyow ama sawir gacmeed
Beta-lixaad ee iOS 13 ee loogu talagalay horumariyeyaasha ayaa hadda la heli karaa